Apple Inobatanidza iyo WebVR Yekuvandudza Nharaunda | IPhone nhau
Apple inobatana neWebhuVR yekuvandudza nharaunda
Mhedziso yekupedzisira yaive iyo Kutangisa kweApple mumunda wezvakawedzera chokwadi, kwete chaiyo. Mune yakakosha taigona kuona mimwe mienzaniso yezvingaitwe mumunda wekusimudzira kunyorera uye kubvira izvozvi taona mienzaniso yakasiyana yevagadziri nezve mikana yayo.
Ikozvino zvave zviri pamutemo, vakomana vanobva kuCupertino vakazivisa zviri pamutemo kubatana kwavo neWebhu yeVVR Nharaunda, chirongwa chakanangana nekugadzira zvirimo zvinoenderana neakawanda masisitimu, zvisinei nemidziyo inoshandiswa, bhurawuza ...
Sezvo isu tichigona kuverenga muKupindaVR, mainjiniya matatu eApple ajoina chirongwa ichi: Dave Singer, semumiriri wemultimedia zvemukati uye software, Brandel Zachernuk seMukuru Front-End Mugadziri uye WebGL Mupepeti Dean Jackson.
Nhau dzekutanga nezve kubatanidzwa kweApple kuchirongwa ichi dzakaburitswa naBrandon Jones weGoogle, mumwe wevakuru vakuru veWebhuVR chirongwa, uyo akakurumidza kusimbisa kutora chikamu muboka. hazvireve kuzvipira kuzviita mumasystem ako.
Chinangwa cheWebVVR, zvinoenderana nevakagadzira, ndeichi:
WebVR ndeye yakavhurika standard iyo inoita kuti zvikwanise kuve neVR mune yako browser. Chinangwa ndechekuita kuti zvive nyore kune wese munhu kuti apinde muVR zviitiko, kunyangwe uine mudziyo upi.
Iyo WebVR nharaunda inosanganisira nhengo dzakakosha seGoogle, Mozilla uye zvino zvakare Apple. Google iri kutarisa mukutsigira ese maCarbhoards nekufungidzira uye ine webhusaiti yakazvipira kuratidza zvese zvakanaka zvinopihwa neicho chokwadi mune izvi.
Kuwanikwa kweApple kuboka iri inogona kuunza nhau zhinji dzinonakidza kana kupa zvachose mukusimudzira kwechokwadi chakawedzerwa icho Apple iri kushanda pachiri uye icho chakatoiswa mumaoko evanogadzira nehurongwa hweARKit. Nguva ichataura, kunyangwe isu tisingazomboziva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inobatana neWebhuVR yekuvandudza nharaunda